Archive du 20190529
Kandida depiote tsy lany Maro no mety hiditra am-ponja
Maro amin’ireo kandida depiote teo aloha no manana dosie. Misy mihitsy aza moa ny nampidirina am-ponja vonjimaika toy ny kandida Leva na Raveloson Ludovic Adrien any amin’ny Distrikan’i Mahabo, Hasimpirenena Rasolomampionona, kandidan’ny IRD any Fandriana,…
Toamasina, Maroantsetra, Mahajanga Raikitra ny fanoherana voka-pifidianana
Manao tohivakana ny fanoherana ny heverina fa tsy fahatomombanan’ny fifidianana amina toerana maromaro, toa an’i Mahajanga, Maroantsetra, Toamasina.
Fiara mifono vy sy fitaovam-piadiana Avy aiza marina, ary ahoana no nidirany teto ?
Tsy sahin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina avoaka mazava mandrak’androany ny marina momba ireo fiara mifono vy sy fitaovam-piadiana nampidiriny teto Madagasikara, ka naderadera ary natolotra ny mpitandro filaminana tetsy Mahamasina ny 19 janoary 2019.
Fanenjehana ny lehiben’ny distrikan’i Vohémar Nomelohin’ny SYNAD
Tsy mankasitraka sy manameloka tamin’ny fihetsika natao tamin’ny namany ny SYNAD (Syndicat National des Administrateurs civils) eo anatrehan’ny toe-javatra nahazo ny lehiben’ny distrikan’i Vohémar ny alahady 26 mey teo.
Fampitahana voka-pifidianana Afaka manao fangatahana ireo kandida
“Tsy misy mahazo mamoaka voka-pifidianana” hoy Thierry rakotonarivo, filoha lefitry ny CENI. Fanamby napetraky ny CENI ny hikirakirana ny fifidianana ao anatin’ny mangarahara hatrany.
Jean Navandahy Ratiharison - Za gasy Nosamborin’ny zandary omaly
Nanamafy ny zandary eo Ankadilalana fa nosamborina omaly talata maraina ny filoha nasionalin’ny fikambanana Zah Gasy, Jean Navandahy Ratiharison izay kandida depiote ao amin’ny boriborintany faharoa.
Antoko ABA “Marefo ny demokrasia eto.”
Manoloana ny taham-pahavitsiana ambany dia ambanin’ireo mpifidy depiote ny 27 mey teo dia naneho ny heviny tamin’ny alalan’ny sekretera nasionaliny, Dany Rakotoson, ny Antokom-Bahoaka Malagasy (ABA).
Rakotomalala Aimèe Martial “Hevitra sy ny safidy no miady fa Malagasy iray ihany”
“Mitony sy milamina ny olona ka hirariana mba hilamina hatramin`ny farany satria Malagasy daholo isika. Ny hevitra sy ny safidy no miady fa Malagasy iray ihany”, hoy ny kandidà Rakotomalala Martial Aimée ao amin`ny boriborintany I raha nanontaniana ny fizotry ny fifidianana.
RAJOELINA ANY FRANTSA
Nigadona any Frantsa omaly maraina ny delegasiona malagasy notarihan’ny Filoha Andry Rajoelina, namaly ny fanasana ara-pomba ofisialy nataon’ny Filoha frantsay Emmanuel Macron.
Fiarovana ny tontolo iainana Niatrika fiofanana fanindroany ny Youclim
Niatrika fiofanana manokana ireo mpampiofana dingana faharoa (STEP 2) ao anatin’ny tetikasa Youclim ny 25 sy ny 26 mey lasa teo.
Tenisy Circuit Africain U 14 tany Nairobi Kenya Namiratra i Randy Rakotoarilala sy Mahefa Rakotomalala
Mpilalao Malagasy roa dia i Randy Rakotoarilala sy Mahefa Rakotomalala no namiratra raha niatrika ny lalao famaranan’ny
Kianjan’ny 3Fa Antanandrano Hisy lalao rahampitso alakamisy
Amin’ny maha andro tsy fiasana ny rahampitso alakamisy 30 mey 2019, izay hankalazan’ny mpino Kristianina ny andro fiakarana, dia hisy lalao hotanterahina eny amin’ny kianjan’ny 3Fa Antanandrano
Isaorana daholo marina !
Tontosa indray iny ny fifidianana depiote. Miandry ny valin’izany isika rehetra.
Fonja nikorontana tany Brezila Gadra 55 no maty nandritra ny roa andro
Raikitra ny fifandonana tamin’ireo voafonja ao amin`ny fonja iray any avaratr'i Brezila. Ny fonjan`i Amazonas dia natao hitobian’ireo jiolahy voasokajy ho mahery fihetsika.
Afghanistan Mihorohoro ny mpianatra
Nitombo avo telo heny ny fanafihana sekoly tany amin`ny faritra maro any Afghanistan tamin`ny taon-dasa raha ny tatitra navoakan`ny UNICEF omaly.
Trano 160 horavana eny Antohomadinika atsimo Tsy azo ekena, hoy ny mponina
Trano 160 tafo misy olona an’arivony no misy mikasa handrodana ao amin’ny fokontany Antohomadinika atsimo, kaominina Antananarivo Renivohitra.
Tsara ny trano fa ny olona ao anatiny no tena mahasambatra !
Miarahaba ny fanjakana isika mianakavy fa vita soa aman-tsara tokoa ny EPP iray anatin’ny 20.000 isa, tany Toamasina.